In ka badan View
- Dhismayaasha & Capacity
- Horumarinta Green
1. BAAQA IYO AQBALAADA. All iibinta wax soo saarka by Focus Safety Glass ( "FSG") si Macaamiisha ku xiran yihiin kuwaas oo Terms of Sale marka laga reebo sida haddii kale si cad ku heshiiyeen in ay in dukumenti qoran saxiixay by FSG. Dokumentigan, wada jir ah ula dukumentiyada kale ee ku heshiiyeen in ay in dukumenti qoran saxiixay by FSG, sheeg heshiiska oo dhan xisbiyada iyo dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha kale ayaa si cad u diiday. Haddii qoraalkani u taagan yahay qayb ka mid ah ama lagu daro by tixraaca galay heshiis iibka FSG, liiska qiimaha, biilka ama dukumenti kale, waxa ku jira heshiiska oo dhan FSG iyo Macaamiisha. aqbalaada Macaamiisha ee alaabta geeyey by FSG koobnaan doonaa aqbalo by Macaamiisha oo dhan oo ka mid ah shuruudaha iyo xaaladaha ku qoran dukumentigan. No heshiis kale, hadal ballan sameeyey by FSG ama la soo jeediyay by Macaamiisha la xiriira iibinta wax soo saarka by FSG in Customer in uusan ahayn mid qoraal oo ay saxiixeen FSG waa waajib on FSG.
Haddii qoraalkani u taagan yahay qayb ka mid ah ama lagu daro by tixraaca galay Aqoonsi ah oo si iibka ah ama dukumenti kale, ka dibna qoraalkani u taagan yahay diidmada ah wax dalab ah by Macaamiisha sameeyey oo waa dalab by FSG ay iibiyaan si ay Customer badeecada aqoonsaday at qiimaha (s) tilmaamay, ku xiran shuruudaha iyo xaaladaha ku qoran dukumentigan. Si iibsiga Macaamiisha ee ku xiran yahay shuruudaha iyo xaaladaha ku qoran dukumentigan iyo kuwan shuruudaha iyo xaaladaha ku xusan lagu baddelayo iyo badalo shuruudaha iyo xaaladaha si iibsiga Macaamiisha ee kasta iyo dhammaan. FSG ee Aqoonsi ayaa la si cad shuruud ku waafaqid Macaamiisha ee shuruudaha iyo xaaladaha ku qoran dukumentigan oo ku waafaqid sida loo arko siin doonaa haddii FSG u ogolaaday in uu lid ku ah in dukumenti qoran saxiixay by FSG. No failure of FSG soo horjeesto kasta oo shuruudaha iyo xaaladaha ku jira isgaarsiinta wax ka Macaamiisha ama shixnaddii ee alaabta by FSG ah loo doonaa sida kacafin ka mid ah shuruudaha iyo xaaladaha ku qoran dukumentigan ama aqbalo ah shuruudaha iyo xaaladaha sida.
2. Shuruudaha iyo Xaaladaha. Kasta oo oraah FSG waxaa shuruud Buyer ee aqbalaada of ERAYADA FSG ka iibinay. Iibsadaha ku xidhnaan doona by kuwan qodobada iibka iyada oo aan isbeddel, haddii aan si kale u soo bixiyey qoraal iyo aqbalay qoraal FSG. Kasta oo shuruudaha iyo xaaladaha ilaha dhaqaale ee kale, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, amarada dalabka Buyer ama la aqoonsado, waxaa loo arko saaray. ERAYADA ka iibinay xakameeyo doonaan oo intay qaataan ka hormariyaan wax kasta oo shuruudaha iyo xaaladaha khilaafsan in dokumentiga kale. An "Order" ama "Order Iibso" waxaa loola jeedaa si iibsiga Buyer ama wax kale si ama heshiis foomka aqbalay by FSG oo qoraal ah.
3. Alaab la bixinayo. FSG ogolaado inuu alaab ururso, oo kaliya tirada iyo nooca alaabta ku tilmaamay in ay Xaqiijinta FSG Order, Pro Forma ama oraah, kaas oo noqon kara ka soo qorshaha mashruuca, caddaymaha kala duwan, iyo / ama si iibsiga Buyer ee (s). FSG ma waxaa waajib inay sameeyaan wax isbedel ah ama lagu daro si ay alaabta ku tilmaamay in ay Xaqiijinta FSG Order, Pro deggenayn ama oraah haddii FSG ogolyahay iyadda oo qoraal iyo, haddii loo baahdo, sixitaanka caddaalad la sameeyo shuruudaha qiimaha iyo dhalmada. Haddii aan si kale isku raacay in qoraal FSG, alaabtii oo dhan bixisey by FSG hoos Amarka, oo ay ku jiraan kuwa la soo saaray si uu ula kulmo faahfaahinta sax ah, waa in ay dulqaadka iyo kala duwanaanta waafaqsan isticmaalka ganacsiga, dhaqanka caadiga ah wax soo saarka FSG ama imtixaanka la taaban karo iyo hababka kormeerka doonaa. Dulqaadka noocan oo kale ah iyo kala duwanaanta abuurin waa wax damaanad FSG oo kala duwan.
4. QIIMAHA. FSG ku xidhnaan doonaa xigashooyin qiimaha ku qoran waxa ay ka dhigaysaa in ay yihiin sheegay in ay noqon "shirkadda" sida uu sheegay marka la eego ay. Haddii aan si kale lagu sheegay dukumintiga heshiis ay khuseyso ay saxiixeen FSG, oo dhan ee qiimaha iyo dhimis lagu daabacay FSG ee, haddii ay jirto, way isbadali by FSG. Haddii ay dhacdo in FSG badala qiimaha ay, qiimaha alaabta hoos dokumentigan aan weli geeyey noqon doonaa qiimaha dhaqan taariikhda FSG helay si wax soo saarka la siiyaa FSG aqbalo amarka qoraal, marka laga reebo in haddii FSG u ogolaaday in uu dib u soo saaridda, wax soo saarka ama bixinta alaabta wax la codsado Macaamilka ee markaas, ikhtiyaarka FSG ee, qiimaha alaabta sida uu noqon doono kuwa saamayn markii tilmaamaha waxaa markii dambe laga helay Macaamiisha si ay u dhamaystiraan soo saaridda sida, wax soo saarka ama dhalmada. Lagu daro kasta oo si fiican la aqbali doonaa oo keliya at qiimaha dhaqan marka amarka dheeraad ah la aqbalo. Dhammaan qiimaha ku salaysan yihiin kharashka shaqada, qalab, gaadiid, heerka canshuurta lagu dabaqi karo iyo waajibaadka caadada, iyo kharashaadka kale ee saamaynta on FSG taariikhda uu ogolaado in binta ee ay khuseyso. FSG waxay meel sax ah, haddii ay dhacdo wax kasta oo kordhay wax ka mid ah kharashka ka dib taariikhda ama korodhka aan caadi ahayn qiimaha suuqa, in ama aan inantayda ka soo dhacdo of force majeure ama failure ka mid ah xaaladaha presupposed, si ay ula qabsadaan qiimaha la bixin dul ogaysiis Macaamiisha.
5. Order inuu sitaa; Baajinta. Ka dib markii Buyer ee Order la aqbalay by FSG, Amarka aan la gelin karaa on qabsaday, dib u habaynta, baajin ama la wareejin aan FSG ee oggolaansho qoraal ah. Haddii ay dhacdo in Buyer taas oo Order kasta on qabtay in ka badan soddon (30) maalmood, Buyer mas'uul ka noqon doonaan, iyo celiso FSG waayo, dhamaan qalabka, shaqaalaha iyo qiimayaasha kor socdka gashay by FSG oo sabab u ah dhufayskii. Haddii Buyer cancels Order kasta, Buyer masuul ka ah bixinta si FSG for joojiyo ama si isbedel lagu eedeeyay macquul noqon doonaan. Baajinta ama si isbedel lagu eedeeyay noocan oo kale ah ka mid noqon kara, laakiin aan ku koobneyn, Price Contract for alaabtii oo dhan geeyey by FSG si Buyer, Price Contract ee dhammaan alaabada alaabta dhamaystirtay in hantida u ahaa reer FSG, dhammaan kharashaadka kale si toos ah lasoo gudboonaatay FSG u ah xad ma awoodaan in loo yarayn isticmaalaya dadaalka yareynta macquul ah, oo lagu eedeeyay kaydinta sida ku cad Section 8 ka mid ah qodobada iibka. Intaa waxaa dheer, haddii waqtiga iibsadaa cancels FSG Order uu leeyahay shaqo ee habka la eego Order ku saabsan mid ka mid ah dabaqyada dukaan ay, FSG loo oggolaan doonaa inay ku dhameystaan soo saarka alaabta in ay yihiin goob dukaan ah waqtiga ku Order waa la joojiyay, meel alaabta ee alaabada alaabta dhammeeyey, iyo biilka Buyer ee Contract Price ee alaabta sida.
6. Kharashka Kale. Iibsadaha qirta oo Ogolaaday in Contract Price uusan waxaa ka mid ah risiidhada saaraha ee guud canshuurta, iibka ama isticmaalka cashuurta, ama gobolka kale oo kasta, degaanka, iyo canshuurta qaranka iyo / ama qiimeynta laga yaabo in la bixin on macaamil ganacsi, haddii aan si kale isku raacay in qoraal FSG . Dhammaan kharashka bixinta dheeraad ah ka timi heshiisyada shaqada maxalliga ah waxay noqon doonaan mas'uuliyadda Buyer. Iibsadaha sii raacdo in dhammaan binta cagta square waa Kharashkan ku salaysan xusan oraah FSG ah. FSG xaq u leedahay inay qaansheegta Buyer kasta iyo dhammaan dulsaar ah oo aan la garaneyn iyo kharashka kala duduwan qiimeeyo FSG by iibiya ay dib taariikhda oraahda.
7. KEENISTA IYO AQBALAADA. Delivery of alaabta by FSG si side barta FOB koobnaan doonaa bixinta si Macaamiisha; iyo habase yeeshee wax lid ku ah oo aan loo eegin ama aan FSG bixiya xamuulka ah, khatar oo dhan khasaaro ama waxyeello ah ee gaadiidka si Customer mari doonaa bixinta si side sida. Macaamiisha waxaa laga yaabaa in lagugu soo dalaco wixii kharash bakhaaraynta, ajuurada demurrage, dhaamin iyo kharashyo kale oo Faydi by ama dhacdo in wax kasta oo dib u dhac ka codsaday ama sahlaansashada Customer ka baxsan taariikhda maraakiibta qorsheeyay. Product bixisey by FSG waa in la baadhaa by Macaamiisha nonconformity (oo ay ku jiraan, xad la'aan, dillaacin, dildilaac, xagashada, ka mid noqoshada ee wax shisheeye, iyo nonconformity ama la'aanta kale), yaraanta iyo qaladaad kale, iyo dhamaan sheegashada helay qoraal FSG gudahood ah hore ee toban (10) maalmood ka dib markii la helo shixnad at caga shixnad asalka ama processing dheeraad ah ama iibinta alaabta by Macaamiisha. Ka gaabinta in ay sameeyaan sheegasho muddada sida gudahood ka koobnaan doonaa dhaafitaanka ah dhamaan sheegashada sida by Macaamiisha, iyo failure sida koobnaan doonaa aqbalaada of badeecada. FSG waa in la siiyo fursad macquul ah si ay u baaraan saarka haleysan yahay ama nonconforming eedeeyey, iyo, ikhtiyaarka FSG iyo sida waajibka keliya ee FSG ee, dayactirka, bedelo ama dib qiimaha mushaarka by Macaamiisha si FSG. Haddii by FSG codsaday, sheyga haleysan yahay ama nonconforming waa in si FSG soo laabtay.
8. Xukunnada Kaydinta. Kasta oo amartay in la dhamaystiray in Buyer ku guuldareysto inuu aqbalo bixinta badeecadaha taariikhda bixinta sheegay on the Xaqiijinta FSG Order la hoos gelin doonaa si ay u soo eedeeyay kaydinta at heerka ka mid ah $ 150.00 shaqabaq bishiiba. Eedeeyay kaydinta waxaa laga bixinayo by net 30 maalmood Buyer doonaan. Xaalado jirin FSG noqon doonaa masuul ka ah wixii kharash ah, ajuurada, magdhaw ama khasaaraha alaabta ama qalabka lagu kaydiyaa iyada oo raacaysa Qaybta this. FSG si gaar ah afeefanaysaa masuuliyad kasta, ama dhaawaca ka dhashay, kaydinta alaabta dhammeeyey ama qalabka ku kaydsan ee hoosyimaada halkan in kasta oo hab heerka warshadaha ama shuruudaha kaydinta gaar ah loo aqoonsaday by FSG in warqadaha wax soo saarka kasta oo lid.
9. Terms Payment. Shuruudaha lacag bixinta Order kasta oo lagu cayimay waa on biilka in maalmo taariikheed, la retainage lahayn ama qarka u-off ogol yahay. Waajibaadka bixinta iibsadaha ee waa inaan la shuruud iibsadaha ee rasiid bixinta ka qayb kasta saddexaad. Iibsadaha mas'uul ka FSG ee kharashka ururinta noqon doonaan, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, ujrada qareenka ee macquulka ah ee ay dhacdo of default iibsadaa ama non-bixinta. FSG xaq u leedahay inay wax soodayn shixnadaha mustaqbalka haddii lacagta waqtiga loogu talagalay shixnadaha ka hor inta aan la helay.
10. Shuruudaha Credit. FSG laga yaabaa, in ikhtiyaarka kaliya, ku heshiiyaan in ay siin marka la eego credit si Buyer. Haddii FSG jimicsi ay doorasho in ay diidaan in ay siin credit si Buyer, FSG masuul ka ah wixii khasaare ah, khasaaraha ama qiimaha wax alla wixii ay u Buyer ma jiri doono. Ereyada credit waxaa waajib ah in FSG ee ansixinta sii of credit Buyer ee. Haddii, in lasameeyay kaliya FSG iyo go'aan, credit Buyer ama taagan dhaqaale noqdo qancin, FSG laga yaabaa in ka noqoto ama wax ka beddelo shuruudaha credit ay.
11. Kormeerka. Iibsadaha marka la helo kormeeri doonaan maalkiisa iyo wargelin FSG qoraal dalab kasta oo alaabta waxaa nonconforming toban (10) maalmood gudahood ah ka dib dhalmada. FSG loo ogolaan doonaa fursad macquul ah inaad baadho alaabada, iyo daaweeyo dalab kasta oo lagu eedeeyay non-waafaqsan, oo ay ku jiraan macquul ah helitaanka alaabta in dhismaha Buyer ee, xarunta kaydinta ama goobta shaqada. Subject si Buyer ee saxiixa heshiiska qarsoodiga ah oo waafaqsan nidaamka FSG iyo dhaqanka ammaanka xarunta, Buyer diyaarin laga yaabaa inaad baadho alaabada ee goobaha warshadaha FSG ee. Si kastaba ha ahaatee, kormeerka sida ma faragelin doonaan howlgallada FSG ee. Diidmada iibsadaha ee wax ku-geedi socodka badeecadaha ama non-waafaqsan alaabta la dhammeeyayna ka gaadho kormeerka sida waa in la sameeyaa qoraal ahaan FSG ka hor shixnaddii ee alaabta sida. No alaabta laga yaabaa in lagu soo celiyaa FSG for credit iyada oo aan oggolaansho ka hor FSG ee ku qoran.
12. damaanad Limited. FSG bixisaa damaanad kooban alaabta geeyey raacayo Amarka. Marka la eego damaanad FSG waxaa ku xusan shahaadada warranty oo kala duwan laga heli karaa codsi. Warranty FSG noqon doonaa isagoo madhan ay dhacdo in lacagta buuxda aan la helin ee bucshiradaha iyo adeegyada gudahood lagu heshiiyey qodobada iibka. Warranty FSG ee xaddidan, sida inay Buyer, kaliya laga dul qoraal ogolaansho ah ee FSG ee Madaxweynaha ama Madaxweyne (s) xigeenka modified laga yaabaa. Qof kasta oo u taagan afka ah loogu tala galay inuu wax ka beddelo wax FSG damaanad jira kooban noqon doonaan sax ahayn oo ka dhan ah Karin FSG. Cillad ku jiri kara kharash dheeraad ah, iyo waxaa waajib ah in oggolaanshaha qoraal ah mirayadahiisa faahfaahin by maamulka FSG iyo / ama wakiillo farsamo ee lasameeyay kaliya FSG ee.
13. Iska fogaynta. FSG mayo damaanad KASTA maldahan OF MERCHANTABILITY AMA JIRDHISKA ujeeddo kasta GAAR AH IYO WAJIBKA WAX KALE AMA MAGIDDA uma sheegayo xusan ERAYADA HEERKA ITS damaanadda. FSG AAN U NOQONAYO masuul ka XAALAD KASTA EE, dhaca, ka dhasha, WAXYEELADA GAAR AH AMA ciqaab aan tooska ahayn ee nooc kasta. Xuquuqda iibsadaha iyo waajibaadka ku saabsan wax kasta oo alaabta bixisey by FSG, oo la xaqiijiyay in ay haleysan, waxaa ku koobnayn kuwa lagu sheegay damaanad Limited FSG ee la siiyo wax iibsadaa. FSG ma aqbali doona ama kharashka ay soo gudbiyeen Buyer ama cid saddexaad, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn kasta kharashka shaqada ee badalaada, ka saarida, kormeerka, baaritaanka ama rakibaadda kasta oo alaabta lagu iibiyo FSG hoos Order ama wixii alaab bedelka.
14. S UITAB ILITY. Macaamiisha waa kaliya mas'uul ka ah go'aaminta ku habboonaanta iyo waafaqid ee Macmiilka ee hababka, geeddi socodka, naqshado iyo qalabka loo isticmaalo la soo saarka iyo haboonaanta badeecada baahida iyo codsiyada Macaamiisha ee. Galaas Annealed ma ku habboon yahay in loo isticmaalo meelaha lagu tilmaamay sida "halista ah" ee xeerarka u yaala dhismeyaasha qaar iyo sharciyada dawlada dhexe. Macaamiisha ayaa ka masuul ah in ay isticmaalaan qalabka glazing badbaadada (tusaale ahaan, quraarad hagaajiyey ama galaas dahaaray) ee goobaha halista ah. FSG laga yaabaa in waqti ka waqti dalab ama in lagu weydiiyo in dib loo eego, imtixaanka, waxay bixiyaan macluumaad ama fikrad ku saabsan waxyaabaha ay bixiyeen FSG, Customer ee hababka, geeddi socodka, naqshado iyo qalab in la isticmaalo iyadoo waxyaabaha sida, ama ku haboonaanta waxyaabaha sida in la soo jeediyay codsigaaga laakiin FSG kuma yeelan doonaan wax kasta oo mas'uuliyad, deyn ama waajib si ixtiraam ku daraa ama si la mid ah ku darsato. Customer waqtiyada oo dhan ka masuul ah go'aaminta haboonaanta sida macluumaadka, dib u eegista iyo imtixaanka natiijada, fikrado, geeddi socodka, alaabta iyo adeegyada ay u isticmaalaan in Macaamiisha ee processing u gaar ah iyo codsiyada iyo garashada iyo fulinta in ay ku qanacsan tahay Macaamiisha oo dhan baaritaano tayada noqon doonaa, lafaguridda, saadaasha, iyo baaritaano kale iyo baaritaanada lagama maarmaanka ah si loo hubiyo in alaabta iyo adeegyada Customer noqon doonaa ammaan, la aqbali karo oo ku haboon in loo isticmaalo xaaladaha dhamaadka-isticmaalka.
15. jadwalka SHIPPING; Ciidamada majeure. All jadwalka maraakiibta soo xigtay waa qiyaas iyo helitaan degdeg ah ku xirnaan doontaa by FSG ka Customer iyo ansixinta xiga by FSG oo dhan macluumaad credit. FSG ka dhigi karaa bixinta badan ama qaybood, haddii aan si kale si cad ku heshiiyeen, iyo dhammaan riteen sida ama qaybood waxaa laga yaabaa in mawduuca qaan-gaar ah oo ay tahay in la bixiyo marka ay sabab hoos qaan kasta oo aan u eegin dhalmo xiga. FSG No qabsan rigoore kasta oo ka dhalan karta in ay la kulmaan jadwalka maraakiibta noqon doonaa haddii FSG ayaa si gaar ah isku raacay in rigoore sida qoraal uu ku saxeexan yahay sarkaal ee FSG ah. FSGs masuul kasta oo dhaawac sababay oo sabab u ah dib u dhac kasta oo ku bixinta ama ku fashilmeen in ay samatabbixin ma noqon doonto sabab u ah wax kasta oo sabab ka baxsan FSG ee gacanta macquul ah, oo ay ku jiraan, xad la'aan, Sharciga Ilaah, fal kasta oo Customer; xayiraadda ama fal kale oo dawladeed, xeerka ama codsi; dab; shil, shaqo joojin, Yaasiin, dagaal; rabshad; daad, raagin ee gaadiidka; ama awood ay u helaan shaqada loo baahdo, qalabka ama goobaha wax soo saarka ugu qiimaha dhaqameedka ( "Dhacdooyinka Force majeure"). Haddii ay dhacdo in kasta oo Event Force majeure, FSG kordhin karaa taariikhda aad dhaleysid muddo siman yahay in markii ugu badiyay by sabab of force majeure ku Event ama jimicsi xaq u gudbiyo in aqbalaada Qaybta 2. Macaamiisha ee badeecada marka samatabbixiyey koobnaan doonaa dhaafitaanka ah dhamaan sheegashada khasaaraha uu keeno wax dib u dhac ama Force majeure Event. Dib u dhac ku bixinta badan ama wajigeeda ama jimicsi ah xaq u gudbinayaa Qaybta 2 ma caawin doono Customer of waajib Macaamiisha ayaa si ay u aqbalaan dhalmo haray. Products geeyey meelo gudahood USA la soo baakadeeyey laga yaabaa on hayayaasha bir ama hayayaasha bungie of FSGs. All uqaadi kartaa sida ay yihiin iyo sii joogi doonaa hantida FSGs. Macaamiisha u isticmaali doonaa taxadar macquul ah in dejinta, loading iyo isticmaalka hayayaasha ka. Hayayaasha waa in loo isticmaalo by Macaamiisha keliya ee la xidhiidha iyo si loo fududeeyo bixinta waxyaabaha FSG iyo ma isticmaalada kale, oo ay ku jiraan, xad la'aan, kaydinta alaabada iyo kaydinta kale ama dhoofintiisa Macaamiisha ama waxyaabaha dhinac saddexaad '. Customer ma bedeli doonaa, iibiyo ama ku xiran encumbrance ah hayayaashii dambe oo caynkaas ah. Customer mas'uul ka yahay in la sameeyo hayayaasha siiyo Customer la heli karo si FSG for soo kabashada iyo khasaaro ama waxyeello ku hayayaasha ka. FSG xaq u yeelan doontaa in ay ka qaadaan Macaamiisha qiimaha bedelka ee hayayaashii kasta oo aan diyaar u ah dib u soo kabashada by FSG, lumay ama la waxyeeleeyey. Marka uu codsi ka mid ah FSG ah, Customer oggolaan doonaa dadka loo qoondeeyey by helitaanka FSG ee xarumaha Macaamiisha ayaa inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah si ay awood ugu dadka sida si loo ogaado tirada iyo xaaladda of hayayaasha hanti Customer iyo inuu ka soo kabsado haysashada hayayaasha ugu faa'iido u ah FSGs . Haddii dib u soo kabashada ee haysashada hayayaasha loo raadinayo by FSG ah, Customer at its kharashka shaqeyn doono FSGs iyo wakiisheen ay isugu shabahay.
16. Xukunka Law. Heshiiskan, iyo Order kasta, lagu by maamuli doonaa, oo yimid abaabul sida uu sheegay, sharciyada Shiinaha.
17. Heshiiska oo Dhan. Oraah FSG ee, kuwaas oo qodobada iibka, FSG ee Xaqiijinta Order, Pro Forma, damaanad Limited FSG ee (haddii lagu dabaqi karo, iyo sida ay soo saartay FSG), iyo dokumenti kasta oo dheeraad ah hereto LABAGEEDI by FSG, waxaa ku jira heshiis dhameystiran oo dhan u dhaxeeya dhinacyada sida u mowduuca warkaasu, iyo badalay iyo baddelo kasta oo ka hor ama contemporaneous isgaarsiinta, Wakiilada, ama heshiisyada, in afka ama qoraal ah, marka la eego arrimaha ay ugu yeeranayaan sida.
Si aad wax badan oo ku saabsan our war-saxaafadeed dambeeyay ama dhacdooyinka ogahay, raalli ka aqbasho cinwaanka emailkaaga ee hoos maran iyo guji ah "GUDBI" button: